Fahasamihafana eo amin'ny C sy C ++
13 Janoary 2011 Narotsak'i Andrew
C vs C ++ C sy C ++ dia samy fiteny fitenenana. Ny C dia fiteny fandefasana fombafomba ary ny C ++ kosa dia fiteny fandaharana miompana amin'ny zavatra. Nisy lesoka sasany tamin'ny fiteny C. Izany no antony nanamboarana ny C ++. Ny C language C dia fiteny fandefasana solosaina novolavolaina tamin'ny 1972 tao amin'ny Bell Labs. Izy izay dia […]
Filed Under: Ny hafa , Programming Tagged Miaraka: rindrambaiko fampiharana , C , C fiteny , C + fandaharana fiteny , fiteny fandaharam-pianarana mifantoka amin'ny zavatra , fiteny fandefasana fombafomba , fiteny fandefasana programa , rafitra miasa UNIX
Fahasamihafana eo amin'ny Java sy J2EE
17 Desambra 2010 Narotsak'i Andrew
Java vs J2EE Java dia fiteny fandefasana sy sehatra hampiroboroboana sy hampiharana rindranasa rindrambaiko. Tonga amin'ny tsiro samihafa izy: Java Standard Edition (Java SE) Ity ny kinova vanila tsotra an'ny Java. Afaka mampihatra rindranasa rindrambaiko miaraka aminy ianao. Java SE dia manana tranomboky kaody lehibe izay misy maro azo ampiasaina […]
Filed Under: Programming Tagged With: J2EE , Java , Java EE , Java ME , Java SE , Java vanilla version , Fandaharana , fiteny fandaharana
Fahasamihafana eo amin'ny JDK sy JRE
JDK vs JRE JDK dia mijoro ho an'ny Java Developer Kit fa ny JRE kosa dia miorina amin'ny Java Runtime Environment. JRE no ilaina hitantanana ny rindranasa Java. Ny bundled anatiny dia fampiharana ny Java Virtual Machine (JVM). Ny JDK dia misy ny JRE sy ireo fitaovana fampandrosoana ny fampiharana Java maro hafa. Ohatra, ny Java compiler (javac) dia […]
Filed Under: Programming Tagged With: Java , Java applications , Java compiler. javac , Java developer , Java Virtual Machine , JDK , JRE , JVM , fiteny fandaharana
Fahasamihafana eo amin'ny JSP sy ny servlets
JSP vs Servlets A Servlet dia singa lozisialy momba ny lozisialy voasoratra ao Java ary mihazakazaka ao anaty tontolon'ny fitoeran-javatra mifanentana fantatra amin'ny anarana hoe container Servelt (toy ny Apache Tomcat). Ny servlets dia be mpampiasa amin'ny fampiharana rindran-tranonkala izay miteraka pejin-tranonkala mavitrika. Izy ireo dia afaka mamorona karazana atiny hafa toa ny XML, lahatsoratra, sary, feo […]
Filed Under: Programming Tagged With: HTML Dynamic , HTML , Java , Java Server , JSP , Servlet , Source Code
Fahasamihafana eo amin'ny Diksionera sy ny Hashtable
15 Desambra 2010 Narotsak'i Andrew
Ny diksionera vs ny rakibolana Hashtable dia voatondrona (tsy misy ilana sora-baventy), ny Hashtable dia tsy (ilaina ny fanaovana sora-baventy). Hashtable dia manana fomba tsara kokoa ahazoana sanda iray noho ny rakibolana IMHО, satria io dia matetika ny soatoavina dia оbject. Raha mampiasa .NET 3.5 ianao dia mora ny manoratra dikanteny extensiоn methоd ho an'ny diksionera […]
Filed Under: Programming Tagged With: .NET , Rakibolana , Rakibolana Generic , GetHash , Hashtable , IMHO
Fahasamihafana eo amin'ny Get sy ny Post
13 Desambra 2010 Narotsak'i Andrew
Get vs Post Raha ny angon-drakitra takelaka dia voahodidin'ny URL izay angatahina amin'ny mpizara, dia antsoina hoe Get izany, raha toa ka alefa ao anatin'ny vatan'ilay hafatra ny angona momba ny endrika, dia antsoina hoe Post izany. Rehefa tsy manana fampahalalana fanampiny miaraka amin'ny URL ianao, ity takelaka ity […]
Filed Under: Programming Tagged With: data , Get request , HTML specifications , Post
Fahasamihafana eo amin'ny Detergent sy ny Agent Chaotropic
Fahasamihafana eo amin'ny Lattice sy Crystal
Fahasamihafana eo amin'ny Apple iPad 2 sy OGT Tablet
Fahasamihafana eo amin'ny karama sy isan'ora